မင်းကြောက်ရွံ့နေတာက မင်းရဲ့ အနာဂတ်ကိုမဟုတ်ဘူး။ မင်းရဲ့ သောကရောက်ရတဲ့ အတိတ်တွေ တဖန်ဖြစ်လာမှာကို ကြောက်ရွံ့နေတာ။
future (noun) - အနာဂတ်
afraid (verb) - ကြောက်ရွံ့သည်
repeat (verb) - နောက်တစ်ကျော့ပြန်သည်၊ ထပ်၍ဖြစ်ပေါ်သည်။
past (noun) - အတိတ်
anxious (adjective) - စိုးရိမ်လျက်ရှိသော၊ ကြောင့်ကြလျက်ရှိသော၊ သောကရောက်နေသော။
It's not the future that you're afraid of. It's repeating the past that makes you anxious. မင်းကြောက်ရွံ့နေတာက မင်းရဲ့ အနာဂတ်ကိုမဟုတ်ဘူး။ မင်းရဲ့ သောကရောက်ရတဲ့ အတိတ်တွေ တဖန်ဖြစ်လာမှာကို ကြောက်ရွံ့နေတာ။ future (noun) - အနာဂတ် afraid (verb) - ကြောက်ရွံ့သည် repeat (verb) - နောက်တစ်ကျော့ပြန်သည်၊ ထပ်၍ဖြစ်ပေါ်သည်။ past (noun) - အတိတ် anxious (adjective) - စိုးရိမ်လျက်ရှိသော၊ ကြောင့်ကြလျက်ရှိသော၊ သောကရောက်နေသော။